Embonini yezemithi, ukuncibilikisa amaphilisi kuwumsebenzi wosuku, isib ngezinhloso zokuhlaziya. Lapho amaphilisi evezwa endaweni enamanzi, ithebhulethi iyancibilika kancane kancane enkambweni edla isikhathi. Noma kusetshenziswa isishukumisi esivamile noma i-agitator ye-blade, ukuchithwa ngokuphelele kwamacwecwe kuhlala kudla isikhathi. Ukuhamba kwe-Ultrasonic kanye namabutho ashiyayo amakhulu asebusweni bawo asusa izinhlayiya kusuka kuthebhulethi futhi azithuthele ezindlini, lapho kugcina ukudluliselwa kwenqwaba phakathi kwethebhulethi nokukhanya okusha, okungafakwanga njalo okuqhubekayo. Lokhu kwenza ukuqeda kwe-ultrasonic kube inqubo esheshayo futhi esebenza kahle, esiza ukusheshisa ukuqothulwa kwezidakamizwa.
I-Lab Ultrasonic Disintegrators
Izimboni ze-Ultrasonic Disintegrators
I-Hielscher disintegrators yezimboni yizinhloli eziphakeme zamandla e-ultrasonic zenzelwe ukusabalalisa okungapheli okusebenzayo kokusaphazeka kwemifudlana emikhulu yesibhakabhaka. Lezi zinhlelo zezimboni zingaphatha kalula ukugxila okuphezulu okuqinile. Izimboni ze-ultrasonics ezifakelwe ifulethi ezingafakelwa emathangini ensimbi, eziphelweni zingilazi noma ezitsheni zepulasitiki kunoma yikuphi ukuma. Ukucindezela umkhumbi we-sonication noma i-flow cell kuqinisa i-acoustic cavitation futhi ngaleyo ndlela inqubo ye-sonication. Imishini ejwayelekile yokwehlukaniswa kwezimboni ye-ultrasonic isukela ku-1000 kuya ku-16,000 Watts wamandla e-ultrasonic nge-sonotrode ngayinye.
Izimboni, lapho ukutholakala kwe-ultrasonic kutholakala kabanzi:
I-Hielscher Ultrasonics igxila kokuhlakazeka okuphezulu kokusebenza ngobungani obukhulu kakhulu bomsebenzisi kanye nenqubekela phambili yobuchwepheshe bezwe. Lokhu kusho ukuthi amazinga we-Hielscher lab disintegrators avumelana kakhulu nokuqonda kwemishini yezimboni. Umsebenzisi angalawula ama-digital ultrasonicators we-Hielscher ngokusebenzisa isilawuli kude esipheqululini. Isoftware yokuqoshwa kwedatha ezenzakalelayo ibhala yonke imingcele ebalulekile ye-ultrasonic efana namandla net, amandla aphelele, amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, isikhathi nosuku njengefayela le-CSV ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, i-disintegrator ye-ultrasonic ingahlelelwa i-othomathikhi ukuvala emva kwesikhathi esinqunyelwe noma okokufaka amandla athile noma izindlela zokudonsa ze-sonication. Izinga lokushisa elinokubhoboka kanye nezinzwa zokucindezela zivumela ukulandelela ngokucophelela izimo zesampula. Njengoba ukulawulwa kwezinga lokushisa kwezinto ezibonelela ukushisa kuyinto ebalulekile yekhwalithi yemiphumela yenqubo, uHielscher unikeza izixazululo ezahlukahlukene zokugcina izinga lokushisa inqubo ebangeni eliqondiwe lokushisa.